Madaxweyne Erdogan oo Shaaca ka qaaday hadal Niyad jab ku abuuray Finland iyo Sweden | Entertainment and News Site
Home » English News » News » Madaxweyne Erdogan oo Shaaca ka qaaday hadal Niyad jab ku abuuray Finland iyo Sweden
Madaxweyne Erdogan oo Shaaca ka qaaday hadal Niyad jab ku abuuray Finland iyo Sweden
daajis.com:- Dowladda Turkiga ayaa wali si xooggan u diidan in dowladaha Sweden iyo Finland xubin rasmi ah ka noqdaan ururka Gaashaanbuurta NATO oo ay dowladda Turkiga xubin muhiim ah ka tahay.
Sweden iyo Finland ayaana gudbisay codsi ay ku dalbanayaan in ay kusoo biiraan Gaashaanbuurta NATO, hasa ahaatee Turkiga ayaa ka biyo diidan in labadaasi dal xubin ka noqdaan NATO.
Madaxweynaha dalka Turkiga Rajeb Dayib Erdogan oo warfidiyeeno kula hadlay gudaha diyaarad uu madaxdeynaha kaga soo noqday dalka Azerbaijan ayuu si cad uga hor yimid in Sweden iyo Finland kusoo biiraan NATO.
Erdogan ayaa cadeeyay in Turkiga inta uu madaxda ka yahay aanu marna ogolaan doonin in dowladaha taageero argagixisida ay ku soo biiraan Ururka Gaashaanbuurta NATO, kuwaas oo ula jeedo dalalka Sweden iyo Finland.
Dowladda Turkiga ayaa ku eedeesay dowladaha Sweden iyo Finland in ay taageeraan kooxaha kurdiyiinta ee xarumaha ku leh Ciraaq iyo Siiriya, kooxaha kurdiyiinta ayaana Turkiga u aqoonsan yahay kooxo argagaxiso ah.